❤️ Uyenza njani iTrendi yeTik Tok elungileyo ngo-2020 - Facebook
Uyenza njani iTrendi yeTik Tok elungileyo ngo-2020
Ukuqala umkhwa kwiTik Tok 2020 kunokuba nzima, kodwa akunakwenzeka nangayiphi na indlela. Kwesi sikhokelo, Siza kuxoxa ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza umkhwa olungileyo weTik Tok ngo-2020 kwaye le nkqubo inokubandakanya ntoni. I-Tik Tok yenye yezona zinto zidumileyo kwaye kuthethwa ngazo malunga nee -apps zemidiya yoluntu kwi-intanethi. Uninzi lwabasebenzisi beTik Tok bafuna umxholo ocoleka ngokukhawuleza, inika umdla, umdla kwaye uyahlekisa.
Uninzi lwabaphembeleli beTik Tok abanezigidi zabalandeli kwi-app baqale ezantsi.. Ke baye benza iividiyo ezimfutshane ezithi qatha engqondweni ngamabona-ndenzile. Oku kuncede ukubenza iinkwenkwezi ze-app njengoko bekhula ngobukhulu kunye nokuthandwa ixesha elide.. Ukuba ulindele ukufumana impumelelo efanayo, oku kunokuba nzima ngakumbi ngenxa yomthamo womxholo kwi-app kunye nenani labasebenzisi abazama ukuduma eqongeni..
Ukuphuhlisa Imibono kunye noMxholo
Kuphuhliso lwezimvo kunye nomxholo, Zininzi izinto onokuthi uzenze ukwenza iTik Tok indlela emangalisayo. Enye yeendlela ezilungileyo zokuphuhlisa izimvo zomxholo wakho kukuthetha nabanye abadali. Ukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni kwiTik Tok yindlela entle yokuseta iintsingiselo zeapp kunye nokwandisa umxholo wakho. Ukusetyenziswa kwakho uhlalutyo Tik Tok yenye yeendlela eziphambili zokuphumeza oku.
Ngaphandle kwemibono onokuyifumana kwi-app, zama ukwenza ezakho izimvo zomxholo. Ezi zinokuphenjelelwa koko kwenzekayo kwindawo okungqongileyo ekufutshane kunye neengcinga zebhalbhu yesibane onokuba nazo kwiziganeko zamva nje.. Ngokukhawuleza ukuba unemibono ethile kwindawo yokugcina, eyona nto ingcono kukuba uzame ukuthumela abaninzi kangangoko ukuze wakhe abaphulaphuli abanomdla nababandakanyekayo kumxholo wakho. Oku kuya kukuvumela ukuba usebenze ngokuthanda i-algorithm. I-Tik Tok ikhuthaza abadali eqongeni abathumela rhoqo kwaye bapapashe umxholo onomdla uluntu olunokuzibandakanya nawo.
Xa udala umxholo wakho, Kubalulekile ukusebenzisa ii-hashtag xa kunokwenzeka. Ukusebenzisa ii-hashtag kwiTik Tok yindlela entle yokwenza umdla kumxholo wakho kunye neprofayile kwiTik Tok. Ngokuqhelekileyo, ukufumana indawo kwiintsingiselo, iividiyo zakho kufuneka zitsale umdla omkhulu ngexesha elifutshane. Zama ukupapasha kwaye wabelane ngezithuba zakho kangangoko unakho ngaphandle kokuzenza zibe spammy kakhulu.
Ukuba iividiyo zakho azinabuchule kunye nomdla, kutheni ungacingi ngokuquka abanye babahlobo bakho. Ukuba nabanye abantu kwiividiyo zakho yindlela entle yokwenza umdla ngakumbi kumxholo ovelisiweyo kunye nokufumana iimbono ezahlukeneyo kwiividiyo ozenzayo..
Nangona kunjalo, kuyimfuneko ukukhumbula ukuba akukho mithetho ethile xa kuziwa kumxholo.. Ewe kunjalo, umxholo kufuneka uthobele izikhokelo zeTik Tok kunye nemigaqo yenkonzo.. Ngaphandle koku, zininzi iindlela zokwenza umxholo wakho ube wodwa kwaye unomdla ukuze utsale abaphulaphuli abaninzi.
Yenza amaza kwiTik Tok
Enye yeendlela abadali ababhekisa ngayo ekuthandeni kukaTik Tok kunye neendlela zokuyichaza njengamaza. Ukwenza amaza kwiTik Tok ke yinto ephambili yokuqinisekisa ukuthandwa kwiTik Tok. Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokwenza umboniso weTik Tok uye wentsholongwane kukuqwalasela abaphulaphuli bakho..
Ukufumana umbono wabaphulaphuli bakho ngumsebenzi olungileyo wophando onokuthi uwenze njengoko kubandakanya ukuba ukwazi ukulungelelanisa umxholo ofanelekileyo ukuze abantu bawonwabele.. Oku kuqinisekisa ukuba abantu banokuhlala bebandakanyeka kwaye benomdla kumxholo onokuthi unikeze.
Akukho fomyula iseti yokudala amaza kwiTik Tok. Oko kuthethwa, kunokuqatshelwa ukuba iintsingiselo zentsholongwane yindlela entle yokwenza amaza kwiTik Tok. Iindlela ezifana ne “uhlukuhlo lwe-Harlem”, i “Umngeni oqingqiweyo”, njl. Ziyindlela entle yokungena kwindawo yeTik Tok kwaye uncede ukhulise abaphulaphuli bakho kwaye ufumane umvuzo iimbono ezibalulekileyo.
Abanye babadali beTik Tok abadumileyo baye banomdla kakhulu kumxholo wabo kwaye bavelise imithombo yeendaba esele idume kakhulu ngenani elikhulu labantu kwi-Intanethi nakwi-intanethi.. Abadali beTik Tok kwezona ndawo ziphakamileyo zeTik Tok bade baququzelele ukudibana kwabalandeli kunye neminyhadala ngenxa yenani elikhulu labalandeli abalenzileyo.. Rhoqo, aba balandeli ngabalandeli kwihlabathi liphela.
Ukuqonda iindlela ezihamba phambili kwiTik Tok
Kubalulekile ukuqonda iintsingiselo zeTik Tok. Kanjalo, Iintsingiselo zinokuba nefuthe elikhulu kwindlela ojongwa ngayo umxholo kwiTik Tok kunye nokuba zingaphi iimbono zakho ezinokufunyanwa ngumxholo. Iintsingiselo zidla ngokuba ngumphumo we-snowball effect. Oku kuxa umxholo wenziwa kwaye usekwa ngokukhawuleza.
Njengoko ibamba, inani elikhulayo labadali kwiTik Tok benza umxholo ofanayo okanye benze iinguqulelo zabo zomxholo eziye zidume.. Oku ke kuba ngumkhwa we-app kwaye kulapho umdla ovela kwamanye amaqonga ungena khona..
Ukongeza kubaphulaphuli behlabathi beTik Tok, iindlela zokusebenza zinokutsala umdla kwaye zithimbe ingqalelo yabantu kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo afana ne-facebook kunye ne-instagram. Umdla ovela kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo uhlala ulungile njengoko kuthetha ukuba iakhawunti yakho inokufumana iimbono ezininzi kubaphulaphuli ababanzi. Inokubakhuthaza ukuba bakhuphele iTik Tok kwaye balandele iakhawunti yakho.
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaUyenza njani eyona vidiyo iphumeleleyo yeTik Tok ka-2020
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaUngazifumana njani izimvo zeTik Tok – Isikhokelo soLwazi